Wararka - Wararka Gaoji ee usbuuca 20210305
Wararka Gaoji ee usbuuca 20210305
Si loo hubiyo in qof walbaa uu heli doono farxad damaanad qaad ah Iiddii guga, injineeradeennu waxay si adag u shaqeynayaan laba toddobaad, taas oo hubinaysa inaan haysanno badeecad nagu filan iyo qayb dayactir ah xilliga wax soo iibsiga ka dib dabbaaldegga Guga.
1. Laga bilaabo FEB 28th ilaa Mar 4, waxaan helnay 38 biilal soo iibsi oo cusub, oo ay ku jiraan 3 qaybood oo ah feer iyo mashiinka xiirista, 4 qaybood oo mashiinka foorarsiga ah ee CNC, 2 gogo 'mashiinka wax lagu shiido busbar. 29 gogo 'oo ah mashiinka busbaaska badan.
Markay ahayd 2-dii Maarso, 14 mashiinno kaladuwan oo farsameysan oo kala duwanaan ah, 2 khadadka mashiinka busbar-ka ee CNC, iyo 3 mashiinnada mashiinka wax lagu gooyo ee CNC ayaa la soo saaray hal maalin oo keliya.
2. Intii lagu guda jiray nasashadan gaaban dabaaldegga Guga, waxaan la xaajoonnaa shirkado badan oo teknolojiyad sare ah, oo ah shirkado nashqadeeya wax soo saarka. Isku dar jawaab celinta macaamiisha, warbixinta cilmi baarista suuqa, iyo talobixinta xirfadeed, waxaan u sameyneynaa qorshe qallafsan cilmiyaysan oo loogu talagalay mashruuca casriyaynta wax soo saarka 2021.
3. Si kor loogu qaado heerka maaraynta isku dhafan, shirkadeena waxay ku casuuntay urur xirfadle ah inay bixiso baaritaan qoto dheer. Waad ku mahadsan tahay sanado badan oo aad xiriir la sameyneysay shirkadeena iyo ururada xirfadleyda ah, ka dib markii aan si buuxda ula xiriiray shaqaalaha waaxyaha kala duwan, ururka xirfadleyda ah wuxuu si aad ah u xaqiijiyay wax soo saarka iyo xaalada maaraynta shirkadayada, wuxuuna siiyay talooyin wax ku ool ah oo dhameystiran oo ku saabsan horumarka iyo dib u habeynta shirkadeena.
Waqtiga boostada: Meey-15-2021